महिलाले अर्काको लोग्ने फकाउन किन नहुने? –
निरुपा प्रसून, साहित्यकार: महिलाभित्र देखा पर्ने दमित प्रेम र यौ’न लाई अक्षरमा उतार्ने लेखिका हुन् । अभिलासा (२०६३) कविता – संग्रह, अभिषेक (२०६६) उपन्यास तथा तिम्रो लोग्ने र म (२०७१) गरी ३ वटा पुस्तक बजारमा ल्याइसकेकी निरुपा पुराना कवि चितवन शिखरवासकी छोरी हुन् । कथा संग्रह ‘तिम्रो लोग्ने र म’ बजारमा आएपछि उनी आलोचितसमेत भएकी थिइन् ।
प्रसिद्ध कथाकार मनु ब्राजाकीको कथा-संग्रह ‘तिम्री स्वास्नी र म’ कै शैलीमा लेखिएको ‘तिम्रो लोग्ने र म’ र उनको लेखनका विषयमा निरुपासँग साप्ताहिकको कुराकानी
त्यो कथा मैले आफू किशोरी हुँदा पहिलो पटक पढेकी थिएँ । कथाको पात्र अर्काकी श्रीमतीसँग हाकाहाकी बेड सम्म पुगेको कुरा पढ्दा मेरा कान रातापीरा भएका थिए । लोग्नेमानिस कति सजिलै यस्ता कुरा लेख्न सक्छन्, स्वास्नीमानिसले यस्तो लेख्न सक्लान् । कसले लेख्ला यस्तो कुरा भन्ने लागेको थियो । तैपनि मैले नेपाली साहित्यमा स्नातक गर्ने बेलासम्म त्यस्तो कुरा कसैले लेखेनन् ।
अरुले कहिले लेख्छन् भनेर कुरेर बस्ने कि आफैले लेख्ने । भन्ने प्रश्न मनमा आयो । त्यसपछि आफैंले लेख्न थालें ।
त्यो कथा २०६८ सालको मधुपर्कमा प्रकाशित भयो । छापिनुअघि यति धेरै प्रतिक्रिया आउला भन्नेचाहिँ लागेको थिएन । नकारात्मकभन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया बढी पाएँ । स्वयं मनु ब्राजाकीले – ‘महिलाले महिलाका पक्षबाट कसैले यो कथा लेखोस् भन्ने चाहेको थिएँ, तपाईंले लेख्नुभयो । तपाईंलाई धन्यवाद र बधाई छ ।’ भन्नुभयो ।
इच्छा त उही हो, चाहे लोग्नेमानिस हुन् वा स्वास्नीमानिस । यौ’निक स्वतन्त्रता जैविक हो तर आर्थिक स्वतन्त्रताले त्यो कुरामा उनीहरूलाई बाधा दिने गरेको छ । आजको युगमा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रमुख भएर आएको छ । जोसँग हैसियत छ, उसले लोग्नेमान्छेलाई पनि केही दिन भाडामा लिएको देखिन्छ । केही महिला सौख र पैसाका लागि यौ’न कर्म पनि गरिरहेका पाइन्छन् । यो वर्ग सानो छ ।
तपाईंको कलम विशेष गरी युवावर्गको यौ’न र प्रेम वरपर नै घुम्ने गरेको छ, किन ?
किनभने म पनि त्यहीं वरपर छु । आफू जहाँ उभिएको हुन्छ, लेखकले त्यही लेख्ने हो । म फेन्टासी प्रेम र यौ’न कथा पढ्न रुचाउँछु तर लेख्दा यथार्थ नै लेख्छु ।
साप्ताहिक बाट ।
← १२ बर्षीय विद्यार्थी र ३४ बर्षीया शिक्षिकाको त्यो प्रेम
कस्तो केटाको खोजीमा छिन् ज्योति मगर? →
भारतले यसरी खायो कालापानी क्षेत्र
November 14, 2019 November 14, 2019 e-khabar